Budata Windows 11 maka Windows
Budata Windows 11
Free Budata maka Windows (4915.20 MB)
Budata Windows 11,
Windows 11 bụ sistemụ arụmọrụ ọhụrụ nke Microsoft webatara dị ka Windows na -esote ọgbọ. Ọ na-abịa na ọtụtụ atụmatụ ọhụụ, dị ka nbudata na ijikwa ngwa Android na kọmpụta Windows, mmelite na Otu Microsoft, menu mmalite, na anya ọhụrụ nke gụnyere nhicha na ụdị Mac. Ị nwere ike ịnwale sistemụ arụmọrụ Microsoft kachasị ọhụrụ site na nbudata faịlụ Windows 11 ISO. Ị nwere ike ibudata Windows 11 ISO beta (Preview Insider Windows) na Softmedal site na nkwado asụsụ Turkey.
Mara: Ihe nlele nke Windows 11 gụnyere mbipụta Home, Pro, Education na Home Single Language. Mgbe ị pịrị bọtịnụ nbudata Windows 11 dị nelu, ị ga -ebudata Windows 11 Preview Preview (Beta Channel) Mee 22000.132 na English.
Budata Windows 11 ISO
Sistemụ arụmọrụ Windows 11 na -abịa na ọtụtụ atụmatụ ọhụụ, ebe a bụ ole na ole nime ihe ọhụrụ ama ama:
Ọhụrụ, karịa ụdị Mac - Windows 11 nwere atụmatụ dị ọcha nke nwere akụkụ gbara okirikiri, agba pastel, yana menu mbido etiti na Taskbar.
Ngwa gam akporo agbakwunyere - ngwa gam akporo na -abịa Windows 11, dị maka nbudata na Storelọ Ahịa Microsoft ọhụrụ site na Amazon Appstore. (Enwere ụzọ dị iche iche maka ndị na -eji ekwentị Samsung Galaxy nweta ngwa gam akporo na Windows 10, ugbu a ọ na -emepere ndị ọrụ ngwaọrụ a.)
Wijetị - Ngwa ugbu a (wijetị) nwere ike ịnweta ozugbo na Taskbar ma ị nwere ike hazie ha ka ị hụ ihe ịchọrọ.
Njikọ Microsoft Otu - Ndị otu na -enweta ndozi ma tinye ya ozugbo na Windows 11 Taskbar, na -eme ka ọ dị mfe ịnweta. (Dị ka Apples FaceTime) Otu dị na Windows, Mac, Android na iOS.
Teknụzụ Xbox maka egwuregwu kacha mma - Windows 11 na -ewe ụfọdụ atụmatụ achọtara na consoles Xbox dị ka Auto HDR na DirectStorage iji meziwanye egwuregwu gị na Windows PC gị.
Nkwado desktọọpụ ka mma - Windows 11 na -enye gị ohere ịtọlite ​​desktọọpụ mebere dị ka macOS site na ịgbanwere netiti ọtụtụ kọmpụta maka nkeonwe, ọrụ, ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ iji egwuregwu. Ị nwere ike gbanwee akwụkwọ ahụaja gị iche na desktọpụ ọ bụla mebere.
Ịfefe dị mfe site na ileba anya na laptọọpụ na ịrụ ọrụ nke ọma - Usoro sistemụ ọhụrụ ahụ nwere atụmatụ Snap Groups na Snap Layouts (nchịkọta nke ngwa ị na -eji na -etinye nọdụ ụgbọ mmiri na taskbar ma enwere ike ịmụba ma ọ bụ belata notu oge maka ịgbanye ọrụ dị mfe).
Windows 11 Nbudata/nwụnye
Mgbe nbudata faịlụ ISO, ị nwere ike iwunye ya na nkwalite ma ọ bụ nhọrọ nwụnye dị ọcha. Iji nweta nkwalite site na Windows 10 ruo Windows 11, soro usoro ndị a:
Nwelite na -enye gị ohere idobe faịlụ, ntọala na ngwa gị mgbe ị na -akwalite nrụpụta Windows ọhụrụ.
Budata ISO kwesịrị ekwesị maka nrụnye Windows gị.
Chekwaa ya notu ebe na PC gị.
Mepee File Explorer, gaa ebe a ga-echekwa ISO, wee pịa faịlụ ISO ugboro abụọ ka imepe ya.
Ọ ga -agbago onyonyo ka ị nwee ike ịnweta faịlụ nime Windows.
Pịa faịlụ Setup.exe ugboro abụọ ka ịmalite usoro nrụnye.
Mara: Jide naka na ịlele nhọrọ Debe ntọala Windows, faịlụ nkeonwe yana ngwa” noge nrụnye.
Soro usoro ndị dị nokpuru iji hichaa wụnye Windows 11:
Ịwụnye dị ọcha ga -ehichapụ faịlụ, ntọala na ngwa niile dị na ngwaọrụ gị noge nrụnye.
Ọ bụrụ nịchọrọ ịmepụta USB nwere ike ibugharị, rụtụ aka na usoro ndị a.
Mara: Pịa gbanwee ihe ị ga -edebe” noge nrụnye.
Pịa ọ nweghị” na ihuenyo ọzọ ka ị nwee ike mezue nrụnye dị ọcha.
Windows 11 ịgbalite
Ị ga -etinyerịrị Ihe nlele Insider Windows 11 na ngwaọrụ ejiri Windows ma ọ bụ igodo ngwaahịa Windows rụọ ọrụ na mbụ, ma ọ bụ tinye Akaụntụ Microsoft yana ikike dijitalụ ikikere Windows nke ejikọtara na ya ka arụchara nke ọma.
Windows 11 chọrọ sistemụ
Obere usoro chọrọ iji wụnye ma rụọ Windows 10:
Ihe nhazi: 1GHz ma ọ bụ ngwa ngwa, cores 2 ma ọ bụ karịa, 64-bit processor ma ọ bụ sistemụ-na-mgbawa (SoC)
Nchekwa: 4GB Ram
Nchekwa: 64GB ma ọ bụ ngwaọrụ nchekwa ka ibu
Ngwa sistemụ: UEFI nwere Boot echekwara
TPM: Module Platform Tụkwasịrị Obi (TPM) 2.0
Ihe eserese: eserese DirectX 12 dakọtara / WDDM 2.x
Ngosi: Karịa sentimita 9, mkpebi HD (720p)
Njikọ Ịntanetị: Akaụntụ Microsoft na njikọ ịntanetị chọrọ maka nrụnye ụlọ Windows 11.
Windows 11 Ụdịdị
Nha faịlụ: 4915.20 MB
Kacha ọhụrụ na: 24-08-2021
Site na ngwa CrystalDiskMark, ị nwere ike tụọ ịgụ na ide ọsọ nke HDD ma ọ bụ SSD na kọmputa gị. ...
Budata Tencent Gaming Buddy ma nwee ọ playingụ igwu egwu PUBG Mobile, Brawl Stars na egwuregwu ndị...
Ọ bụrụ na ị na -eche ihe dị nime kọmputa gị, nke a bụ Speccy, mmemme ngosipụta sistemụ sistemụ na...
Budata KMSpico, ntinye arụmọrụ Windows nefu, mmemme mmemme Office. Kedu ihe kpatara I kwesiri iji...
IObit Driver Booster 8 bụ mmemme nefu nke na-enye ohere ịchọta ndị ọkwọ ụgbọ ala, imelite ndị ọkwọ...
Ihe Nchịkọta Microsoft Visual C ++ Redistributable maka Visual Studio 2015, 2017, na 2019 bụ...
Onye na -ahọrọ ụcha ihuenyo bụ mmemme bara uru nke ukwuu nke na -enyere gị aka ijide koodu agba...
Nlekọta ọkwọ ụgbọ ala maara ihe bụ mmemme mmelite ọkwọ ụgbọ ala nefu maka ụdị Windows. Nlekọta...
CCleaner bụ ihe ịga nke ọma na usoro njikarịcha na usoro nchekwa nke nwere ike ịme nhicha PC,...
Site na nbudata Advanced SystemCare, ị ga - enwe usoro njikarịcha sistemụ nke so na mmemme kachasị...
Microsoft Visual C ++ 2005 bụ ngwugwu na-ejikọ ọba akwụkwọ Visual C ++ chọrọ site na ngwa, mmemme,...
Budata Master Clean Master bụ free kọmputa Cleaner na booster. Clean Master bụ mmemme Windows nwere...